डेङ्गुझैँ फैलिँदै स्क्रव टाइफस – Chitwan Post
भरतपुर । डेङ्गुको महामारी देखिएको चितवनमा स्क्रव टाइफसका बिरामी पनि उत्तिकै देखिएका छन् । मुसा प्रजातिको जीवमा बस्ने माइट नामक किर्नुको टोकाइबाट यो रोग लाग्छ ।
स्क्रव टाइफस संक्रमण गराउने माइट खासगरी खेत, झाडी र घाँसमा रहने मुसा प्रजातिमा रहन्छ । बेलैमा नियन्त्रणतर्फ चासो नदिए यसले पनि डेङ्गुझैँ महामारीको रुप लिन सक्ने भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरुले सचेत हुन आग्रह गरेका छन् । संक्रमित व्यक्तिलाई अत्यधिक टाउको दुख्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, १०३ देखि १०४ डिग्रीसम्म ज्वरो आउने, जीउ दुख्ने, आँखा हल्का रातो हुने, पसिना बढी आउनेलगायत लक्षण देखिन्छ ।
चितवनमा साउनदेखि हालसम्म ५५ जना संक्रमित भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनले जनाएको छ । कतिपय निजी अस्पतालले बिरामीको तथ्याङ्क अपडेट नगर्दा अझै संख्या यकिन गर्न नसकिएको कार्यालयको भनाइ छ । टाइफाइड भनेर उपचार गराउँदा बिरामी समस्यामा परेका छन् । सबैभन्दा पहिले पाल्पा जिल्लामा यो रोग यसवर्ष देखिएको हो । पाल्पामा हालसम्म ८१ जनामा यो रोग देखिएको छ । पाल्पापछि चितवन जिल्ला उच्च जोखिममा रहेको छ ।
गत वर्ष यो रोगको संक्रमित संख्या ३ सय ३३ रहेको कार्यालयका कीट निर्देशक राम केसीले बताए । यो रोगबाट चितवन जिल्लामा एक बालकको केही दिनअघि मृत्यु भएको कार्यालयले जनाएको छ । चितवनको अस्पतालमा उपचार गराएका रौतहट र नवलपरासीका एक–एक जनाको केही दिनअघि मृत्यु भएको छ । केही दिनको उपचारपछि यो रोग निको हुने डाक्टरहरु बताउँछन् ।ं ढिला गरी रोग पत्ता लागी उपचार भएमा निको हुन गाह्रो हुने डाक्टरहरु बताउँछन् ।
‘यो रोग डेङ्गुभन्दा खतरनाक हो’, भरतपुर अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डा. कालिदास अधिकारीले भने, ‘समयमै उपचार गरे ठीक हुन्छ, ढिला गरी उपचार गरेमा ज्यान जान पनि सक्छ ।’ डेङ्गुझैँ महामारी नै नभए पनि चितवनमा स्क्रव टाइफसका बिरामी पनि देखिएको डा. अधिकारीले बताए । डेङ्गुले मान्छे नमर्ने तर स्क्रवले मर्न पनि सक्ने भन्दै यसतर्फ बढी सचेत हुनु जरूरी रहेको उनको भनाइ छ ।
संक्रमित माइटले मानिसलाई टोक्दा उसको ¥यालमा भएको जीवाणु (ओरिएन्टा सुसुगामुसी) रगतमा फैलिन्छ । संक्रमित व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा भने यो रोग सर्दैन । टाइफाइड ठानेर यो रोगको गलत पहिचान हुँदा समस्या देखिने गरेको उनले बताए । शरीरमा यो जीवाणु फैलिएपछि फोक्सो, कलेजो र मस्तिष्कमा संक्रमण हुन थाल्छ ।
समयमै सही उपचार नभए दीर्घकालीनरुपमा सुन्ने क्षमता गुम्ने, रक्तचाप न्यून हुने, शरीरका विभिन्न अंगमा क्षति पुग्ने, मिर्गौला फेल हुने, निमोनिया, ब्याक्टेरियल संक्रमण हुने, छारेरोग र मासु कुहिनेजस्ता समस्या देखिने डाक्टरहरुको भनाइ छ ।